. Tangres Industiral CO, LTD yasungulwa ngo 2010, etholakala "Chinese City bobumba - Foshan Guangdong". Kusukela kwamiswa, inkampani wethu waphikelela ukuphathwa imfundiso yokuziphendukela "Njengoba sisebenza kanye inhliziyo eyodwa futhi Winning emhlabeni ngobuqotho". Ngokusebenzisa ajamelane neenlingo nobudisi, sibangelwa phakathi eside ukuziphilisa namanye amazwe inkampani.
Ububanzi yebhizinisi kuhlanganise nokuhlonza, yokuthengisa, kanye ejenti kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle. Inkampani yethu futhi ibambisene kakhulu ne esiphathiswa ngakho asikwazanga ukusiza amaklayenti sithole okungcono ocean yezimpahla. Ezweni okusheshayo lokushintsha Ceramic, inkampani eba ngokushesha, futhi umkhiqizo wawo yokuthengisa ukugcina okwandisa lwenyanga ngayinye, tile Ceramic, engagqwali ekhishini zika, engagqwali umngcele, umcengezi ukugeza, 3D ukhaphethi Tile, futhi imikhiqizo efana ukuthengisa kahle ngaphakathi nangaphandle izwe kanye ngokuwina uthando nangezindumiso okusezingeni eliphezulu kusuka amakhasimende ethu zenani.
Isizathu esenza inkampani ungenza enjalo impumelelo kakhulu emncintiswaneni abukhali wukuthi kakhulu nemfashini izinga layo umkhiqizo uphefumulela abathengi, kanye nezinsiza zalo ephelele emva-sales uwine emakethe, kanye nemikhiqizo ezinhle kanye namasevisi okuhle esesikwenzile Tangres lanamuhla. Ithimba lethu onolwazi ezinhle professional futhi isebenza kakhulu devotedly nangempumelelo. Izisebenzi Business babe professional namanye amazwe isipiliyoni kanye nolwazi mkhiqizo. Opharetha bayoqeqeshwa sokufundela umsebenzi futhi sifinyelele amazinga IsiZulu eyayifunwa izinhlangano ezifanele zikahulumeni, futhi ukuthola i-International Amaphepha Specialist Ukufaneleka Certificate ekhishwe izinhlangano ezifanele zikahulumeni.
Tangres , ephendula ngokushesha ukuze ukwehlukahlukana emakethe ukuhola mkhuba! Ukuthuthukisa njalo bafinyelele ekupheleleni! Ukuzama okusemandleni ukwanelisa amakhasimende ethu kuzo zonke izici!